Laliga Archives - Sports Myanmar
​ရော်​နယ်​ဒို ဟာ ၂၀၁၇ရဲ့ ​ပေါ်တူဂီအ​ကောင်းဆုံးကစားသမားဆု ကို ထပ်မံ​​သိမ်းပိုက်ခဲ့ပါတယ်​။ အဆိုပါဆု အတွက်​ ပက်ထရီစီယို (စပို့တင်း လစ္စဘွန်း) နှင့်​ဘာနာဒို ဆေးဗား (မန်စီးတီး) တို…
လီယွန်​နယ်​မက်​ဆီ ဟာ ယခုနှစ်​ အတွက်​ ကမ္ဘာ့ ဖလား ရယူလို​ကြောင်း​ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်​။ ထို့​နောက်​ အာဂျင်​တီးနာပြည်​သူ​တွေသာမက ကမ္ဘာ့ တစ်​လွှား​ဘောလုံးအားကစားကို မြတ်​နိုးသူ အများစု…
လာလီဂါ ရွှေဖိနပ် ဆု ကို သူ ရလိမ့်မယ်လို့ အသင်းဖော်တွေနဲ့ လောင်းကြေးထပ်ခဲ့တဲ့ ရိုနယ်လ်ဒို
ရီးရဲမက်ဒရစ် အသင်း တိုက်စစ်မှုး ခရစ္စတီယာနို ရိုနယ်လ်ဒို က သူ ဟာ ရာသီ အကုန် မှာ လာလီဂါ ရွှေဖိနပ်ဆု (…
ပေါ်တူဂီရဲ့ အကောင်းဆုံး ကစားသမားဆု ဆွတ်ခူးရရှိသွားပြန်တဲ့ ရော်နယ်ဒို
ပေါ်တူဂီဘောလုံးအဖွဲ့ချုပ်ဟာ 2017 ခုနှစ်ရဲ့ အကောင်းဆုံးဆုတွေကို မနေ့ကပဲ တရားဝင် ချီးမြှင့်လိုက်ပြီ ဖြစ်ပါတယ်။ ဆု ရွေးချယ်ဖို့အတွက် နည်းပြတွေ၊ ကစားသမားတွေ၊ ပရိသတ်တွေ ရဲ့…
ကျွန်​​တော်​ဟာအ​ကောင်း​ဆုံးကစားသမားဆိုတာ အမြဲပြသနိုင်​ခဲ့တယ်​လို့ ဆိုလိုက်​တဲ့ စီ​ရော်​နယ်​ဒို
ကစားသမားဘဝမှာ ​နောက်​ထပ်​တစ်​ဦးချင်းဆုကို ထပ်​မံပိုင်​ဆိုင်​ခဲ့ပြီး​နောက်​ ရီးရဲယ်​မက်​ဒရစ် နဲ့ ​ပေါ်တူဂီ စတားဖြစ်​သူ ခရစ်​စတီယာနို​ရော်​နယ်​ဒို က ၎င်းအ​ပေါ် ​ဝေဖန်​ခဲ့မှု​တွေအ​ပေါ် ပြန်​လည်​ တုန့်​ပြန်​သွားခဲ့ပါတယ်​။ စီ​ရော်​နယ်​ဒို ဟာ…
အနာဂတ်​မှာ ​ဘောလုံး​လော က​နေ အနားယူမူနှင့်​ ပတ်​သတ်​ပြီး ​​ပြောဆိုလို​က်​ တဲ့ မက်​ဆီ
ဘာစီလိုနာအသင်း ရဲ့ အဓိက ကစားသမား ဖြစ်​သူ လီယွန်​နယ်​ မက်​ဆီဟာ ယခုနှစ်​ရာသီတွင်​​ခြေစွမ်း​အထူး​ ​ကောင်းမွန်​လျက်​ရှိ​နေပါတယ်​။ မက်​ဆီ ရဲ့ သွင်းဂိုးများဖတ်​တီးမူများနှင့်​အတူ ဘာစီလိုနာအသင်း…
ငယ်​ငယ်​က ကွင်းထဲ မှာ ဖြစ်​တတ်​တဲ့ ပြဿ နာ​တွေ ကို ​ဘယ်​လို မက်​ဆီ ဘယ်​လို​ဖြေရှင်းခဲ့သလဲ?
ကစားသမား အချိူ့ ဟာ ကွင်းထဲတွင်​ ​အော့အန်​ခြင်း.ဖျားနာခြင်းအပြင်​ ပြသနာ မျိူးစုံရှိတတ်​ပါတယ်​။ မက်​ဆီဟာ ငယ်​စဉ်​က ကွင်းထဲမှာ ​အော့အန်​ခြင်းနှင့်​ပတ်​သတ်​တဲ့ ပြသနာများကို…
ရီးရဲယ်​မက်​ဒရစ်​ အသင်း ဟာ မ​နေ့ညက ဂျီရိုနာအသင်းကို (၆-၃)ဖြင့်​ အနိုင်​ရရှိ ဂိုးပြတ်​အနိုင်​ရရှိကာ အဆင့်​၃​နေရာကို ပြန်​​လည်​​ရောက်​ ရှိလာ ခဲ့ပါတယ်​။.အက်​သလက်​တီကိုအသင်းဟာ ရူံးပွဲ​ကြောင့်​ အဆင့်​၂​နေရာ ကို…
မ​နေ့ညက ဘာစီလိုနာအသင်းဟာ ဘီဘာအိုအသင်းကို အိမ်​ကွင်းမှာ ၂ဂိုးဖြင့်​အနိုင်​ရရှိခဲ့ပါတယ်​။ ဆွာရက်​မပါ​ပေမယ့်​ အသင်းရဲ့ တိုက်​စစ်​ကို ဟန်​မပျက်​ သွား​ဘဲ အယ်​ကာဆာ နှင့်​ မက်​ဆီ တို့ က…
ရိုနယ်လ်ဒို ခြေစွမ်းပြ တိုင်းမှာ မက်ဒရစ် အတွက် ပိုကောင်းတာတွေ ဖြစ်လာခဲ့တယ်လို့ ဗက်ဇ်ကွက် ပြောဆို
ရီးရဲ မက်ဒရစ် အသင်း တောင်ပံ ကစား သမား လူးကပ် ဗက်ဇ်ကွက် က အသင်း ရဲ့ တိုက်စစ်မှုး ရိုနယ်လ်ဒို ခြေစွမ်း…
​ရော်​နယ်​ဒိုဟာ မက်​ဆီ ထက်​ ​ကျော်​လွန်​ပြီး သွင်းဂိုးအများဆုံး ဖြစ်​လာလိမ်​.မယ်​လို့ ဇီဒန်း​ ​ဟောကိန်းထုတ်​
ရီးရဲယ်​မက်​ဒရစ်​အသင်းဟာ မ​နေ့ညက ဂျီရိုနာအသင်းကို အိမ်​ကွင်းတွင်​ ဂိုးပြတ်​အနိုင်​ရရှိခဲ့ပြီး အမှတ်​​ပြည့်​ ယူနိုင်​ခဲ့ပါတယ်​။ ထိုပွဲ တွင်​ ​ရော်​နယ်​ဒို ဟာ သွင်းဂိုး ၄ဂိုးအထိ ရယူခဲ့သလို လာလီဂါသွင်းဂိုး…
စီရော်နယ်ဒိုဟာ အခြားကမ္ဘာကလာတဲ့သူပါပဲ – ဇနက်ဒင်းဇိဒန်း
မနေ့ညက ရီးရဲယ်မက်ဒရစ်အသင်း ဂျီရိုနာအသင်းကို ဘာနေဗျူးမှာ ၆ ဂိုး ၃ ဂိုး နဲ့ အနိုင်ရရှိခဲ့တဲ့ ပွဲစဉ်မှာ နောက်ထပ်အကောင်းဆုံး ခြေစွမ်းကို ပြသသွားခဲ့တဲ့ တိုက်စစ်မှုး…
ပန်းတိုင်ရောက်တဲ့အထိ တိုက်ပွဲဝင်ကြဖို့ကစားသမားတွေကို သတိပေးလိုက်တဲ့ #ဗယ်​ဗာဒီ
ဘာစီလိုနာအသင်း ဟာ ဘီဘာအို အသင်းကို မ​နေ့ည က၂ဂိုးဖြင့်​ အနိုင်​ရရှိခဲ့ပါတယ်​။ အနိူင်​ဂိုးများကို အယ်​ကာဆာ နှင့်​ မက်​ဆီ တို့က သွင်းယူ​ပေးထားထားပါတယ်​။ ဆွာရက်​မပါတဲ့…
ကစားသမားဘ၀ ဟတ်ထရစ်ပေါင်း 50 ပြည့်မြောက်လာခဲ့တဲ့ ရော်နယ်ဒို
ရီးရဲမက်ဒရစ်အသင်းဟာ မနေ့ညက ကစားခဲ့တဲ့ ဂီရိုနာအသင်းနဲ့ အိမ်ကွင်းပွဲစဉ်မှာတော့ 6-3 ရလာဒ်နဲ့ အနိုင်ကစားခဲ့ပြီး အမှတ်ပေးဇယားရဲ့ ဒုတိယ နေရာအထိ တက်လှမ်းနိုင်ဖို့အတွက် ခြေလှမ်းတွေ စတင်လာခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်။…
ရီးရဲယ်​ သတင်းတို များ
ယ​နေ့ည ၂း၁၅ မှာ​တော့ ရီးရဲယ်​မက်​ဒရစ်​ အသင်းဟာ ဂျီရိုနာအသင်းကို ဘာ​နေဗျူးမှာ လက်​ခံယှဉ်​ပြိုင်​ ကစားရဖို့ ရှိ​နေပါတယ်​။ ဗလန်​စီယာ အသင်းဟာ နိုင်ပွဲ​ကြောင့်​…
ယ​နေ့ည​ မှာ ​တော့ ဘာစီလိုနာအသင်း ဟာ ဘီဘာအိုအသင်းကို နူးကမ့််​ ယှဉ်​ပြိုင်​ ရမှာဖြစ်​ပါတယ်​။ ဘာစီလိုနာ အသင်း ဟာ ဒုတိ​ယ​နေရာက အက်​သလက်​တီကိုအသင်းကို ၈မှတ်​အထိ…
နောက်ထပ် သူလို ကစားသမားမျိုး ထပ်ပေါ်လာမှာ မဟုတ်ဘူးလို့ ပြောဆိုလိုက်တဲ့ CR7
ရီးရဲမက်ဒရစ် တိုက်စစ်မှုး ရော်နယ်ဒိုကတော့ ကမ္ဘာ့ဘောလုံးလောကမှာ ပင်ကိုယ်ပါရမီတွေ ထူးချွှန်ကြတဲ့ ကစားသမားပေါင်း များစွာရှိနေခဲ့သော်လဲ သူ့လို ကြိုးစားမှုနှုန်းနဲ့၊ သူ့လို အောင်မြင်မျိုးတွေ ရယူနိုင်မယ့် ရော်နယ်ဒို…
မက်​ဆီ နှင့်​ ​ရော်​နယ်​ဒို ဘယ်​သူ​အ​ကောင်းဆုံးလဲ ?
လက်​ရှိအချိန်​မှာ ကမ္ဘာ့ အ​ကောင်းကစားသမားနှစ်​ဦး လို့ ဆိုရင်​ မက်​ဆီ နှင့်​ ​ရော်​နယ်​ဒို တို့ ကို ​ပြေးမြင်​မိကြထင်​ပါတယ် ။ ယ​နေ့​ခေတ်​ ​ဘောလုံး…
ဖလားသုံးလုံးရာသီ အတွက်​ ကြိုတင်​ ဘာမှ ​မ​တွေး​တောရဲတဲ့ ကိစ္စ​လေး​တွေ ရှိ​နေတယ်​ဆိုတဲ့ ဗယ်​ဗာဒီ
ဘာစီလိုနာအသင်း ဟာ ယ​နေ့ည မှာ​တော့ ဘီဘာအိုအသင်းနှင့်​ ယှဉ်​ပြိုင်​ကစားရဖို့ ရှိ​နေပါတယ်​။ ဘာစီလိုနာအသင်းဟာ အမှတ်​​ပေးဇယားကို ၈မှတ်​အကွာက ​နေ ဦး​ဆောင်​​နေ​ပေမယ့်​ ဘီဘာအို အသင်းက​တော့ အဆင့်​၁၂မှရပ်​တည်​​နေပါတယ်​။ဗယ်​ဗာဒီက​တော့…
​​မိမိ နှင့်​ နိူင်းယှဉ်​လို့ရတဲ့သူဟာ ကျ​နော်​ကိုယ်​တိုင်​ပါပဲ လို့ ထုတ်​​ဖော်​​ပြောကြား လိုက်​တဲ့ ​ရော်​နယ်​ဒို
ရီးရဲယ်​မက်​ဒရစ်​ အသင်းကစားသမား ဖြစ်​သူ ​ရော်​နယ်​ဒို ဟာ ယခုနှစ်​ရာသီ တွင်​လည်း ရီးရဲယ်​မက်​ဒရစ်​ အသင်းကို ချန်​ပီယံလိဂ်​ တွင်​ သုံးကြိမ်​ဆက်​ ချန်​ပီယံ ဖြစ်​ဖို…